Arda Turan: Ciyaaryahan ka tirsan Barcelona oo xukun ku muteystay ka dib markuu Cusbitaal xabad ku dhex riday - Jigjiga Online
HomeCiyaarahaArda Turan: Ciyaaryahan ka tirsan Barcelona oo xukun ku muteystay ka dib markuu Cusbitaal xabad ku dhex riday
Istanbul (JigjigaOnline) – Ciyaartoyga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Barcelona ee Arda Turan ayaa lagu xukumay ku dhawaad saddex sano oo xabsi ah ka dib markii isbitaal dhexdiisa uu xabad ka riday ka dib markii dagaal dhexmaray isga iyo qof heesaa ah.
“Dhacdooyinkan waxaan ka bartay casharro” ayuu qoray. “Hadafkeyga ugu weyn waa inaan qoyskeyga, xaaskayga, kooxdeyda iyo saaxibadeyda ay igu faanaan”, ayuu yiri.
Ciyaartoygan khadka dhexe ka dheela wuxuu u dhashay Turkiga. Xirfadiisa kubadda wuxuu ka bilaabay kooxda Galatasaray isagoo marka da’yar. Waxaa loo magacaabay kabtan markuu 21 sano jirka ahaa.